Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Oge Ọhụrụ na Nchebe Njem Nleta Latin America
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi Colombia • Crime • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Akwụkwọ akụkọ USA • WTN
Onye isi oche Nleta njem nlegharị anya nke ụwa Dr. Peter Tarlow bụ onye isi okwu na ọgbakọ nchekwa nchekwa nchekwa nchekwa nchekwa nchekwa na Colombia na nso nso a na Colombia.
N'October 14-15, ndị uwe ojii mba na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Colombia webatara oge nchedo njem nlegharị anya ya na mmadụ ya na nke mebere ya.Congreso de Seguridad Turística ”(Nnọkọ Njem Nleta na Nchekwa njem).
Ihe dị ka narị mmadụ abụọ gara ọgbakọ ahụ n'onwe ha yana ihe ruru puku mmadụ iri abụọ si ebe niile na Latin America.
Ọgbakọ a nwere ndị na -ekwu okwu si mba Colombia na mba Latin America ndị ọzọ yana Dr. Peter Tarlow, onye na -anọchite anya United States.
Colombia abụrụla onye ndu na ndị uwe ojii njem nlegharị anya. N'okpuru ntuzi aka nke Coronel Jhon (ọ bụghị ihe na -ezighi ezi) Harvey Alzate Duque, Colombia abụrụla onye ndu Latin America na nchekwa nchekwa njem. Nkwuwa okwu a na nchekwa na nchekwa njem nlegharị anya agbanweela echiche ọjọọ mba ahụ n'oge gara aga, taa Colombia bụ onye ndu na njem nlegharị anya Latin America.
Ọ bụ Jorge Luis Vargas, onye isi ndị uwe ojii Colombia mepere mmemme ahụ. Ndị na -ekwu okwu mba ụwa abụghị naanị site n'ofe Latin America kamakwa site na France na Spain. Isiokwu ndị na-ekwu okwu sitere na otu nchekwa njem nlegharị anya na ndị uwe ojii nchekwa njem nlegharị anya si bụrụ ihe dị mkpa na afọ ọrịa a na-esote Covid-19 ruo nsogbu nchekwa cyber na nchekwa bio. Mgbe a jụrụ ya maka mkpa nchekwa nchekwa njem, Tarlow kwuru na "afọ iri gara aga, Colombia bụ ebe dị nnọọ iche" Tarlow gara n'ihu site n'ikwu na n'agbanyeghị na n'ime iri afọ gara aga ndị ọbịa bịara Colombia na -atụ egwu ịpụ apụ ọkachasị mgbe ọchịchịrị gbara, ọnọdụ ahụ adịkwaghị. ikpe ahụ. Tarlow kwuru na taa n'ihi puku kwuru puku ndị uwe ojii njem nlegharị anya raara onwe ha nye na ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ Colombia ebe ha maara na naanị ihe egwu ha ga -eche ihu bụ na ha agaghị achọ ịpụ.
Dr. Peter Tarlow, Network Tourism Network
Ndị na -ekwu okwu ọgbakọ ahụ ji otu olu too ọgbakọ a wee chọpụta mkpa ọ dị inwe ọgbakọ asụsụ Spanish na Latin America niile. Dịka ọmụmaatụ, Juan Fabián Olmos, onye tupu ọ la ezumike nká, onye isi ọrụ nlegharị anya njem nlegharị anya Cordoba Argentina, kelere ndị uwe ojii Colombia ọrụ dị egwu ha mere n'ịmepụta ebe nchekwa na nchekwa maka ndị ọbịa si gburugburu ụwa. Brigadier General Minoru Matsunaga nke Dominican Republic kwuru maka etu Politur (ndị uwe ojii jikọtara ọnụ na nchekwa njem ndị agha na ngalaba nchekwa) si bụrụ akara ahịa maka nchekwa njem n'ofe mpaghara.
Juan Pablo Cubides onye na -ahazi ọrụ nchekwa njem njem n'ofe Colombia kwuru na Colombia bụ mba na -ahụ nchekwa njem nlegharị anya dịka akụkụ nke ile ọbịa ya. Cubides kwuru na ndị uwe ojii abụghị naanị ndị nnọchi anya iwu, mana ndị nnọchi anya obodo ha, yana ụdị onye uwe ojii njem nlegharị anya bụ akụkụ dị mkpa na mmepe akụ na ụba mba. Ndị ọkà okwu ndị ọzọ ama ama gụnyere Manuel Flores si Mexico. Flores bụ onye Latin America nke mbụ nwetara nturu ugo World Tourism Network Dike nke njem ihe nrite, yana Oscar Blacido Caballero, nke iwu ndịda Peru nke gụnyere obodo njem nlegharị anya dị mkpa na Cuzco na Machu Pichu ama ama n'ụwa. Ọgbakọ a abụghị naanị lebara anya na nsogbu mpaghara kamakwa nsogbu mba ụwa dịka nchekwa cyber. Dọkịta Juan Antonio Gómez, onye Spen, nyere nghọta ọhụrụ banyere iyi egwu ịntanetị zuru ụwa ọnụ ọzọ ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ụwa.
Nzukọ a kwụsịrị n'October 15th site n'ịbụ abụ nke ndị Colombia na ndị uwe ojii na mkpebi siri ike itinye ihe ndị a mụtara n'ofe Central na South America.
Ozi ndị ọzọ banyere Network Tourism Network pịa ebe a.